के सोशल मिडियाले यसको नवीन क्षमतामा पुगेको छ? | Martech Zone
शनिबार, जनवरी 11, 2014 शनिबार, जनवरी 11, 2014 Douglas Karr
पछिल्लो केहि बर्षमा सामाजिक मिडियाको वृद्धि हामीले देखेका कुनै पनि कुराको विपरीत थिएन। सवारी को साथ, अवश्य पनि, सोशल मीडिया मार्केटिंग थियो। २०१ 2014 मा हेर्दै जाँदा, म मद्दत गर्न सक्दिन तर आश्चर्यचकित भए - सामाजिक मिडिया जति छिटो भयो - यो अब आफ्नो नवीन क्षमतामा पुगेको छ। म भन्दै छु कि सोशल मिडिया कुनै पनि हो कम लोकप्रिय न त यो भन्न मिल्छ कि सोशल मिडिया मार्केटिंग हो कम प्रभावी, त्यो मेरो कुरा होइन। मेरो कुरा के हो भने कि म केहि आउँदै छु भनेर उत्साहित छैन।
ठुलो डाटा र विज्ञापनको लागि ठूला डाटा र अवसरहरूले ट्यून टेक्नोलोजी (वा यसलाई बर्बाद) गर्न जारी राख्नेछ। मुख्य अन्तरक्रियात्मक तत्वहरू यहाँ छन्, यद्यपि ... हामीसँग कुराकानी, इमेजरी, र भिडियो टेक्नोलोजीहरू छन्। हामीसँग मोबाइल र ट्याब्लेट एकीकरण छ। हामीसँग ब्राण्डको समग्र दृश्यतामा लेखकत्व र सोशल मिडियाको प्रभाव छ। हामीसँग पहिले नै केहि छ उमेर समूह फेसबुक छोड्दै, ब्लक मा ठूला केटाहरू र arguable, सबै भन्दा परिष्कृत र सुविधा धनी मंच।
हामीसँग पहिले नै सामाजिक अनुगमन, सामाजिक क्युरेसन, सामाजिक प्रकाशन, सामाजिक सिन्डिकेशन, सामाजिक ग्राहक समर्थन, सामाजिक वाणिज्य, सामाजिक रिपोर्टि have ... मैले केहि मिस गरेको छु? प्लेटफर्महरू अधिक परिष्कृत भएका छन् र अब अन्य सामग्री व्यवस्थापन उपकरणहरू, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन, र ईकामर्स प्रणालीमा समाहित हुँदैछन्।
समयले अविश्वसनीय पाठहरू पनि प्रदान गरेको छ। कम्पनीहरु अब बुझ्छन् कसरी अनलाइन विदारकहरूसँग व्यवहार गर्ने प्रभावकारी रूपमा। कम्पनीहरूलाई के थाहा छ सामाजिक मिडियामा बेवास्ता गर्नुहोस् - वा कसरी गर्ने यसको साथ शीर्षकहरू समात्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ कि यो त्यस्तो ठाउँ हुन सक्छ जुन बाहिर निकाल्छ डरलाग्दो मानिसहरू मा सबैभन्दा नराम्रो.
मेरो आफ्नै सामाजिक व्यवहार र कार्यान्वयन को रूप मा, म नयाँ प्लेटफार्महरु मा आफैलाई शिक्षित गर्न र वर्तमान प्लेटफर्महरु को पूर्ण लाभ उठाउन रणनीतिहरु लागू गर्न धेरै वर्ष को लागी scrambled। मैले मेरो फोकस समायोजित गरेको छु, मेरो मिडियामा छलफल गर्न र एको गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्दै, तर जहिले पनि व्यक्तिहरूलाई पूर्णतया व्यस्त र रूपान्तरण गर्न हाम्रो साइटमा फिर्ता ड्राइभ गर्दैछु। मेरो दैनिक, साप्ताहिक, र सोशल मिडियाको लागि मासिक प्रक्रियाहरू हुन् - मँ भन्छु हिम्मत - अब नियमित हुन।
अगाडि बढ्दै म एक दर्शकको निर्माणको लागि एउटा समुदाय निर्माण सुधार गर्न चाहान्छु। म तपाईंलाई नयाँ उपकरणहरू देखाउन चाहन्न, म तपाईंहरूसँग तिनीहरूमा छलफल गर्न पनि चाहन्छु। तर त्यो अवसर पहिले नै अवस्थित छ - यो त्यस्तो चीज होइन जुन मैले अर्को बर्षमा बदल्दै गरेको देख्दछु।
के म यस बन्द छु? के तपाईं आउँदै गरेको सामाजिक मीडिया मार्केटि technologies टेक्नोलोजीमा थप गति र वृद्धि देख्नुहुन्छ? तपाइँ अझै तपाइँको सामाजिक मिडिया रणनीति समायोजित गर्दै हुनुहुन्छ वा यो पर्याप्त नियमित छ? के त्यहाँ तपाइँलाई चाहिएको नयाँ उपकरण छ? वा आज हामीसँग आवश्यक सबै उपकरणहरू छन्?
टैग: फेसबुकफोरस्क्वायरGoogle +LinkedIntwitter
यात्रा गर्दा मोबाईल डाटाको पागल रकम उपभोग गर्नुहुन्छ
Leanne Hoagland - स्मिथ
जनवरी 13, 2014 मा 9: 04 एएम
हार्वर्ड बिजनेस रिव्युको एक भर्खरको ब्लगले सुझाव दियो कि सोशल मिडियाको चलिरहेको प्रभावले अधिकांश कर्मचारीको दैनिक आचरणमा आफैँ घुम्नेछ जसले सामाजिक मिडिया मार्फत मार्केटिंग सन्देशलाई विस्तार गर्दछ। यो प्रवर्धन मेरो नम्र धारणामा, केवल हालको राजस्व संचालित व्यवसाय मोडेललाई एक व्यक्तिले संचालित व्यापार मोडेलमा परिवर्तन गर्ने उत्प्रेरक हुन सक्छ।
टेलिफोन, रेडियो, टिभी, इत्यादले गरेझैं सामाजिक मिडियाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ र जारी रहनेछ।
२०१ - - शीर्ष २ Sa बिक्री प्रभावकारीहरू - http://labs.openviewpartners.com/top-sales-influencers-for-2013
जनवरी 14, 2014 मा 5: 56 एएम
मलाई लाग्छ सोशल मिडियाले बजारमा मात्र होइन दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव पार्नेछ।
२०१ 2014 मा मैले के आशा गरिरहेको छु, तथापि, दुवामिस र क्रानिकलमी जस्ता धेरै बेनामी सामाजिक नेटवर्कहरूको उदय हो।
डुवामिस, उदाहरण को लागी, उपभोक्ता उपयोगिता र संगै अभिनव अवधारणा र प्रकार्य प्रदान गर्दछ
सुरक्षित अनलाइन संचार वातावरण को लागि मांग।